बढ्दो आत्महत्या : थपिँदै समस्या – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बढ्दो आत्महत्या : थपिँदै समस्या
२०७६ आश्विन १, बुधबार ०९:२१ गते
संसारभर समस्याको रुप लिइरहेको आत्महत्याको रोकथाम र समाधानमा आफ्नो सानो समय छुट्याउनुपर्ने समय आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एउटा मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्वमा हुने मृत्युहरुका प्रमुख कारणमा आत्महत्या दसौँ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा भने हरेक वर्ष औसत ६ हजार ८ सय ४० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्, जसमा किशोर र किशोरीहरु बढी हुने गरेका छन् ।
चितवन जिल्लामा पनि आत्महत्या बिस्तारै चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चितवनमा १३९ जनाले आत्महत्या गरेकामा २०७५/७६ मा सो संख्या १५९ मा उक्लिएको छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा १६ वर्षमुनिका कुल १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७६ को असारसम्ममा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका मात्रै कुल ८४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ऊर्जावान् युवाहरु नै आत्महत्याको सिकार हुँदा देशलाई असर पर्ने त निश्चित नै छ । उक्त अवधिभर आत्महत्या गर्नेहरुमा १७४ जना पुरूष र १०२ जना महिला रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक शालिग्राम शर्मा भन्छन्, ‘दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अहिले हरेक वर्ष नेपालमा लगभग ८ प्रतिशतका दरले आत्महत्याका घटनाहरु वृद्धि हुने गरेका छन् ।
आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न नसके यसले युद्धभन्दा पनि भयानक स्थितिको सृजना गर्न सक्छ, महामारी नै निम्तिने खतरा रहेको छ ।’ उनी अझै भन्छन्, ‘मानिसबाहेक अन्य प्राणीले आत्महत्याको प्रयास गर्दैनन्, हामीले भने आवेशमा आएर ज्यान नै फाल्ने गरेका छौँ । जिन्दगीमा आशावादी, सकारात्मक र रचनात्मक भएर बाँच्ने हो भने पनि तनावलाई जित्न सकिन्छ ।
खासगरी, डिप्रेसन अर्थात् तनावलाई आत्महत्याको प्रमुख कारण मान्ने गरिएको छ । मानिसले जीवनमा विभिन्न प्रकारका इच्छा र चाहना बुनेको हुन्छ । जब उसका इच्छा पूरा हुँदैनन् अथवा ऊ असफल हुन्छ तब उसले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गर्दछ । पढाइमा हुने असफलता, प्रेम सम्बन्धमा आउने बाधा, पारिवारिक कलहलगायतका कुरालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसहरुले मृत्युलाई नै समस्या समाधान गर्ने बाटोका रुपमा रोज्ने गरेका छन् ।
आत्महत्याको सोच आउँदा अन्य व्यक्तिको साथको आवश्यकता रहने बताउँछन्, मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. खगेन्द्र काफ्ले । उनी भन्छन्, ‘आत्महत्या खासगरी डिप्रेसन अर्थात् तनावले हुने विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालमा भने आवेशमा आएर आफूलाई मार्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । आत्महत्या गर्नेहरुमा युवाहरु नै बढी हुने गरेकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यसले राज्यलाई नराम्रो असर पार्छ ।’
काफ्ले थप भन्छन्, ‘कतिपय मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्नेलाई घृणाको भावले हेर्ने गरेको पाइन्छ । आत्महत्या रोजेको व्यक्ति कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो वा छ भन्नेबारे कसैले पनि जान्न खोज्दैनन् । मानिसको व्यवहारमा कसैसँग नबोल्ने, एक्लै बस्न रूचाउने, झन्कने वा रिसाउनेजस्ता परिवर्तन देखिन थाले भने ऊ तनावमा छ कि भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
बिरामी व्यक्तिको मनमा के कुरा खेलेको छ, उसका नजिकका मान्छेले त्यस कुराको पनि जानकारी राख्नुपर्छ ।’ उनी अझ जोड्छन्, ‘बढी तनाव हुने सैन्य, चिकित्सा वा अन्य प्रकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना अल्लि बढी रहन्छ । सकेसम्म आफ्नो जीवनशैलीलाई तनावरहित बनाउनुपर्छ ।’
कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउन बेरोजगारी र गरिबीले पनि भूमिका खेल्ने गरेका छन् । तर, यसको मतलब जागिरे र पैसा कमाउनेहरुले आत्महत्या गर्दैनन् भन्ने पनि होइन । एक अध्ययनका अनुसार संसारमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेहरुको सूचीमा डाक्टरहरु समेत पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, खेलाडी, कलाकार वा सेलिब्रेटीहरुमा पनि आत्महत्या गर्ने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा देखिने गरेको छ । सामान्य मानिसहरुका लागि सुखी देखिने कलाकारहरु किन आत्महत्या गर्न अघि पर्छन् ?
गायक हेमन्त शर्मा भन्छन्, ‘कुनै पनि सेलिब्रेटी एक समय वाहवाहीमा रमाएको हुन्छ, त्यो वाहवाही सधैँ समान रहँदैन । समय बित्दै जाँदा उसको प्रभाव पनि कमजोर हुँदै जान्छ र नयाँ सेलिब्रेटी उदाउँछन् । यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा पनि सेलिब्रेटीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।’ उनी थप्छन्, ‘आवश्यकताभन्दा बढी इच्छा राख्दा पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ ।’
साधारणतया मानिस मर्न चाहँदैन । यदि तपाईंका नजिक कसैले पटकपटक मर्न मन लागेको कुरा गर्छ भनी ऊ पक्कै समस्यामा छ भनी बुझ्नुहोस् । ऊसँग समय बिताउनुहोस् र हौसला प्रदान गर्नुहोस् । तपाईंको सानो समयले उसलाई फेर्न सक्छ । आत्महत्याको सोच आउनेबित्तिकै आफ्ना अभिभावक, शिक्षक वा साथीका माझ आफ्ना कुरा राख्नुहोस् । जीवन अमूल्य छ, त्यसै खेर नफाल्नुहोस् ।